Bilaogin'ny orinasa: mamaly ny resabe
Talata, Jona 15, 2010 Alahady 19 Janoary 2014 Douglas Karr
Nanana fihaonana mahafinaritra tamin'ny masoivoho iray eto Indianapolis izay miasa mba hiantohana ny mpanjifan'izy ireo hanana orinasa matanjaka paikadin'ny bilaogy orinasa. Manomboka am-piandohana izy ireo ary niresaka betsaka momba ny resabe sy ny bilaogy izahay. Ny bilaogy manokana napetrak'izy ireo dia miresaka lohahevitra iray izay mety hiteraka tsikera avy amin'ireo izay manana fomba fijery mifanohitra.
Izaho dia nijery orinasa maromaro nanohitra ny tsikera ratsy tamin'ny fiezahana hiaro tena na hiady hevitra momba ny hevitr'izy ireo momba ilay manohitra blog. Paikady ratsy. Rehefa tonga ao amin'ny bilaogiko ianao hiaro ny toerana misy anao dia tsy miady hevitra amiko fotsiny ianao fa ho hitanao fa miady hevitra amin'ny tafiky ny mpanaraka mitovy hevitra mamaky tsy tapaka ny bilaogiko ianao.
Matetika, rehefa manomboka ny resabe ao amin'ny bilaogiko dia mijanona fotsiny aho ary miandry. Matetika, ny mpamaky dia ho avy hamonjy ahy ary hamotipotika ilay olona. Izany no mitranga rehefa ihantsiana anao handray ny ady amin'ny fananan'ny ekipa mpanohitra. Tsy miady hevitra amin'ilay bilaogera fotsiny ianao - fa miady hevitra amin'ilay tambajotra ao ambadiky ny bilaogy. Ary rehefa miady hevitra ianao dia mitombo ny fifantohana… mitombo ny firosoana ara-tsosialy, mitombo ny fikarohana ary hitanao eo amin'ny valiny ity lahatsoratra mifanohitra ity ny orinasa.
Ento mody any an-trano hatrany ny tolona. Raha misy bilaogera manoratra momba anao na ny orinasanao ratsy, ampiasao ny bilaoginao mba hamaliana izany. Tsy mila miresaka azy ireo akory ianao… fa ny rohy miverina mankany amin'ny lahatsoratr'izy ireo dia hahasarika ny sain'izy ireo matetika mba hahitany ny valinteninao. Manantena aho fa hiverina amin'ny bilaoginao izy ireo ary hanome hevitra. Angamba fantatr'izy ireo tsara kokoa! Tokony hahafantatra tsara kokoa anao koa ianao.
Ny hany zavatra ratsy kokoa noho ny orinasa iray mamaly mivantana ao amin'ny bilaogin'ny mpanohitra dia tsy mamaly mihitsy. Amin'ny haino aman-jery vaovao, tsy misy valiny ampitahaina amin'ny hubris sy ny tsy fahampian'ny fitokisana. Ny bilaogera iray izay tsy mamaly ny tsikera mahavariana dia matetika no ekena ho sandoka… tsy eo ho eo izy ireo mba hangarahara fa hampiroborobo ny tenany fotsiny. Ny orinasan'izy ireo sy ny bilaogin'izy ireo dia mamoy ny fahatokisana sy ny mpamaky.
Ento mody any an-trano hatrany ny tolona!
Marketing amin'ny mailaka sa marketing amin'ny Facebook?